သီးသန့်လုံခြုံရေးမူဝါဒ - Bracalente Manufacturing Group
အသုံးပြုသူ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်နှင့်အချက်အလက်ကာကွယ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏အစီအစဉ်
အသုံးပြုသူ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်နှင့်အချက်အလက်ကာကွယ်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏တာ ၀ န်ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ site အသုံးပြုသူများနှင့်၎င်းတို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကာကွယ်ရန်လိုအပ်သည်။ ဒေတာသည်တာ ၀ န်ယူမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်လုံးဝလိုအပ်သောအခါမှသာပြုလုပ်သင့်သည်။ သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ဘယ်တော့မှရောင်း၊ ငှား၊ မျှဝေမည်မဟုတ်ပါ။ သင်၏ခွင့်ပြုချက်မရပဲသင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုလူသိရှင်ကြားထုတ်ဖော်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်မှတ်ချက်ပေးရန်သို့မဟုတ်ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်သင်ဆန္ဒရှိမှသာသင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက် (အမည်) ကိုလူသိရှင်ကြားထုတ်ပြန်လိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးနှင့်ပြည်တွင်းကွန်ပျူတာစနစ်များနှင့်အတူဤ ၀ က်ဘ်ဆိုက်သည်အချက်အလက်ကာကွယ်ခြင်းနှင့်အသုံးပြုသူများ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့် ပတ်သက်၍ အောက်ဖော်ပြပါနိုင်ငံအဆင့်နှင့်နိုင်ငံတကာဥပဒေများကိုလိုက်နာရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
အီးယူအထွေထွေအချက်အလက်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးစည်းမျဉ်း 2018 (GDPR)
ကယ်လီဖိုးနီးယားစားသုံးသူသီးသန့်တည်ရှိမှုအက်ဥပဒေ 2018 (CCPA)
အောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့မည်သည့်သတင်းအချက်အလက်ကောက်ယူကြောင်းနှင့်၎င်းကိုကောက်ယူရသည့်အကြောင်းရင်းများကိုသင်တွေ့ရှိနိုင်သည်။ စုဆောင်းထားသည့်အချက်အလက်အမျိုးအစားများမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် -
ဒီ site သည်အသုံးပြုသူအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုကိုခြေရာခံရန် Google Analytics (GA) ကိုအသုံးပြုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုအသုံးပြုသောလူ ဦး ရေကိုဆုံးဖြတ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအချက်အလက်များကိုအသုံးပြုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်စာမျက်နှာများကိုမည်သို့ရှာဖွေ။ အသုံးပြုသည်ကိုပိုမိုနားလည်ရန်၊ ဝက်ဘ်ဆိုက်မှတဆင့်သူတို့၏ခရီးကိုခြေရာခံရန်။
GA သည်သင်၏ပထဝီအနေအထား၊ ကိရိယာ၊ အင်တာနက်ဘရောင်ဇာနှင့်လည်ပတ်မှုစနစ်စသည့်အချက်အလက်များကိုမှတ်တမ်းတင်သော်လည်း၊ ဤအချက်အလက်တစ်ခုမှကျွန်ုပ်တို့အားသင့်အားကျွန်ုပ်တို့အားခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းမပြုပါ။ GA သည်သင်၏ကွန်ပျူတာ၏ IP လိပ်စာကိုလည်းမှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ သင့်အားပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရသင်ကိုယ်တိုင်ဖော်ထုတ်နိုင်သော်လည်းဂူးဂဲလ်က၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့အားခွင့်မပြုပါ။ Google ကိုတတိယပါတီဒေတာပရိုဆက်ဆာအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။
GA သည် cookies များကိုအသုံးပြုသည်။ အသေးစိတ်ကို Google ၏ developer လမ်းညွှန်များတွင်တွေ့နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သည် GA ၏ analytics.js အကောင်အထည်ဖော်မှုကိုအသုံးပြုသည်။ သင်၏အင်တာနက်ဘရောက်ဇာတွင် cookies များကိုပိတ်ခြင်းသည် GA ကိုသင်၏လည်ပတ်မှု၏မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းကိုမဆိုဤဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိစာမျက်နှာများသို့ခြေရာခံရန်တားဆီးလိမ့်မည်။
Google Analytics အပြင်၊ ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်သည်ကွန်ပျူတာ၏အိုင်ပီလိပ်စာနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော (အများဆိုင်ဒိုမိန်းတွင်သိမ်းဆည်းထားသော) သတင်းအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့ဆိုဒ်ရှိမည်သည့်စာမူမဆိုမှတ်ချက်တစ်ခုထည့်ရန်ရွေးချယ်ပါကသင်၏မှတ်ချက်ဖြင့်သင်ရိုက်ထည့်သောအမည်နှင့်အီးမေးလိပ်စာသည်သင့်ကွန်ပြူတာ၏ IP လိပ်စာနှင့်သင်မှတ်ချက်တင်သည့်အချိန်နှင့်နေ့စွဲတို့နှင့်အတူဤ ၀ က်ဘ်ဆိုက်၏ဒေတာဘေ့စ်သို့သိမ်းဆည်းလိမ့်မည်။ ဤအချက်အလက်သည်သင့်အားသက်ဆိုင်ရာစာမူ၏မှတ်ချက်အပိုင်းတွင်ပါဝင်သူအဖြစ်သတ်မှတ်ရန်သာအသုံးပြုသည်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောတတိယပါတီဒေတာပရိုဆက်ဆာများသို့မပို့ပါ။ သင်ဖြည့်စွက်သောသင်၏နာမည်နှင့်အီးမေးလ်လိပ်စာကိုသာအများသုံးဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်ပြလိမ့်မည်။ သင့်ထင်မြင်ချက်များနှင့်သက်ဆိုင်သောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ဤအရာသည်သင့်တော်သည့်အချိန်မရောက်မချင်းဤ site ပေါ်တွင်ရှိနေလိမ့်မည်။
မှတ်စု: သင်၏ကာကွယ်မှုကိုသေချာစေရန်၊ သင်ဤဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်တင်ထားသောမည်သည့်ဘလော့ဂ်ပို့စ်၏မှတ်ချက်များကိုမဆိုမှတ်ချက်နေရာတွင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုထည့်သွင်းခြင်းကိုရှောင်သင့်သည်။
သင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အီးမေးလ်သတင်းလွှာတွင်စာရင်းသွင်းရန်သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်ပုံစံတင်ရန်ရွေးချယ်ပါကကျွန်ုပ်တို့ထံပေးပို့သောအီးမေးလ်လိပ်စာကိုတတိယပါတီစျေးကွက်ရှာဖွေရေးဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီသို့ပေးပို့လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့အီးမေးလ်လိပ်စာကိုတတိယပါတီအရောင်းမြှင့်တင်ရေးကုမ္ပဏီ၏အီးမေးလ်အရောင်းအ ၀ ယ်ကိုဆက်လက်အသုံးပြုနေသမျှကာလပတ်လုံးသို့မဟုတ်စာရင်းမှဖယ်ရှားခြင်းကိုမတောင်းဆိုမှီအထိသင်၏အီးမေးလိပ်စာသည်သူတို့၏ဒေတာဘေ့စ်အတွင်း၌ရှိနေလိမ့်မည်။
သင်ပို့ပေးသောအီးမေးလ်သတင်းများသို့မဟုတ်အီးမေးလ်မှဖယ်ရှားခြင်းတောင်းခံစာများပါသောဖျက်သိမ်းမှုလင့်ခ်များကို အသုံးပြု၍ စာရင်းမသွင်းခြင်းဖြင့်သင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်အသုံးပြုသူ၏တောင်းဆိုမှုများကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်ကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းနိုင်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ခွင့်ပြုချက်ကိုရရှိသောအခါသို့မဟုတ်အောက်ပါအခြေအနေများအောက်တွင်သင်တောင်းခံသည့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုပေးခြင်း မှလွဲ၍ သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုတတိယပုဂ္ဂိုလ်များအားငှားရမ်းခြင်း၊ ဝေငှခြင်းမပြုပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆင့်ခေါ်စာများ၊ တရားရုံးအမိန့်များ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဥပဒေရေးရာအခွင့်အရေးများကိုတည်ဆောက်ခြင်းသို့မဟုတ်ကျင့်သုံးခြင်း၊ တရားမ ၀ င်လှုပ်ရှားမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်၊ ကာကွယ်ရန်သို့မဟုတ်အရေးယူရန်အတွက်သတင်းအချက်အလက်များကိုမျှဝေရန်လိုအပ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အခြေအနေများအားချိုးဖောက်ခြင်းသို့မဟုတ်ဥပဒေအရလိုအပ်သည်များ၊ အခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုနှင့်ပူးပေါင်းပါကသင်နှင့်ပတ်သက်သောအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့လွှဲပြောင်းပေးမည်။
အချို့ကိစ္စများတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် ၀ ယ်ယူစရာမလိုဘဲသင်၏လှည်းကိုစွန့်ခွာသွားပါကအကြောင်းကြားစာပေးပို့ရန်ပြန်လည်အရောင်း ၀ န်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အလုပ်လုပ်သည်။ ဖောက်သည်များကဆန္ဒရှိပါကဝယ်ယူမှုပြီးမြောက်ရန်သတိပေးခြင်း၏တစ်ခုတည်းသောရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်သည်။ စျေးကွက်ရှာဖွေရေး ၀ န်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီများသည်ဖောက်သည်များကလှည်းကိုစွန့်ခွာသွားလျှင်ငွေပေးငွေယူအပြီးသတ်ရန်အီးမေးလ်ဖိတ်ခေါ်ရန်သင့်အီးမေးလ် ID နှင့်ကွတ်ကီးများကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီဖမ်းယူသည်။ သို့သော်ဝယ်သူ၏အီးမေးလ် ID သည်ဝယ်ယူမှုပြီးဆုံးသည်နှင့်သူတို့၏ဒေတာဘေ့စ်မှဖျက်ပစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များသို့မဟုတ်အသက် ၁၆ နှစ်အောက်အရွယ်မရောက်သေးသူများ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုတတိယပါတီအချက်အလက်ကောက်ယူသူများထံရောင်းချခြင်းမပြုပါ။ ထို့ကြောင့်“ ကျွန်ုပ်၏ဒေတာများကိုမရောင်းပါနှင့်” မှဖယ်ထုတ်ခြင်းခလုတ်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်တွင်မဖြစ်နိုင်ပါ။ ထပ်တလဲလဲပြောရလျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏သတင်းအချက်အလက်များကိုဝန်ဆောင်မှုတောင်းဆိုချက်ကိုဖြည့်စွက်ရန်သို့မဟုတ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဆက်သွယ်ရေးအတွက်တစ်ခုတည်းသောရည်ရွယ်ချက်အတွက်စုဆောင်းနိုင်သည်။ သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုရယူလိုလျှင်သို့မဟုတ်ဖျက်လိုပါကသင်၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအီးမေးလ်မှတဆင့်ပေးပို့ခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
အကယ်၍ သင်သည်အသက် ၁၆ နှစ်အောက်ဖြစ်ပါကမိဘများ၏ခွင့်ပြုချက်ရယူရန်လိုအပ်သည် -
တစ် ဦး ငွေသွင်းငွေထုတ်လုပ်ခြင်း
ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုရယူခြင်း / ဖျက်ခြင်း
သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကြည့်ရှုရန်သို့မဟုတ်ဖျက်လိုပါကအသုံးပြုထားသောအီးမေးလ်လိပ်စာ၊ သင်၏နာမည်နှင့်ဖျက်မှုတောင်းဆိုချက်တို့ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ထံအီးမေးလ်ပို့ပါ။ တစ်နည်းအားဖြင့်ဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူသိမ်းထားသောသင့်အချက်အလက်များကိုကြည့်ရှုရန်နှင့်ဖျက်ရန်ဤစာမျက်နှာ၏အောက်ခြေရှိပုံစံကိုဖြည့်နိုင်သည်။ အဆက်အသွယ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဤစာမျက်နှာ၏အောက်ခြေတွင်တွေ့ရှိနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်စားပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များကိုဆောင်ရွက်ရန်တတိယပုဂ္ဂိုလ်များကိုအသုံးပြုသည်။ ဤတတိယပါတီများကိုဂရုတစိုက်ရွေးချယ်ပြီးအားလုံးသည်ဥပဒေကိုလိုက်နာကြသည်။ သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဖျက်ပစ်ရန်သင်တောင်းဆိုပါကထိုတောင်းဆိုချက်ကိုအောက်ပါပါတီများသို့လည်းပေးပို့လိမ့်မည်။
Microsoft က (ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ)
Facebook က (ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ)
Instagram ကို (ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ)
အကယ်၍ သင်က၎င်းတို့ကိုလက်ခံရန်ရွေးချယ်ပါကဤပေါ်လစီသည် cookies နှင့်အခြားနည်းပညာများအသုံးပြုခြင်းကိုအကျုံးဝင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသောကွတ်ကီးအမျိုးအစားများသည်အမျိုးအစား ၃ ခုခွဲသည်။
ဤ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်များနှင့်အက်ပ်များပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ဤ cookies များကိုအသုံးမပြုပါကကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်၏အစိတ်အပိုင်းများသည်အလုပ်လုပ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ session cookies များသည်အသုံးပြုသူ၏ကွန်ယက်အမြန်နှုန်းနှင့်ကြည့်ရှုနိုင်သည့်စက်နှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေသောလမ်းညွှန်မှုအတွေ့အကြုံကိုခွင့်ပြုသည်။
၎င်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်အက်ပလီကေးရှင်းများအသုံးပြုခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းပေးပြီး ၄ င်း၏အလုပ်လုပ်ပုံကိုတိုးတက်စေရန်ကျွန်ုပ်တို့အားကူညီသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သရုပ်ခွဲကွတ်ကီးများကအကြည့်အများဆုံးစာမျက်နှာများကိုပြသည်။ သင်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုရယူရာတွင်သင်၌အခက်အခဲရှိမရှိကိုလည်း၎င်းတို့ကကူညီပေးသည်၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်မည်သည့်ပြproblemsနာကိုမဆိုဖြေရှင်းနိုင်သည်။ ထို့အပြင်ဤကွတ်ကီးများကကျွန်ုပ်တို့အားအသုံးပြုမှုပုံစံအားလုံးကိုစုစည်းထားသည့်အဆင့်တွင်ကြည့်ရှုရန်ခွင့်ပြုသည်။
Tracking, Cookies နှင့်အလားတူနည်းပညာများ
သင်၏အကျိုးစီးပွားနှင့်သက်ဆိုင်သောကြော်ငြာများကိုကျွန်ုပ်တို့ဤနည်းပညာများအသုံးပြုသည်။ ယခင်ဝက်ဘ်ရှာဖွေခြင်းလှုပ်ရှားမှုအပေါ် အခြေခံ၍ အွန်လိုင်းကြော်ငြာများပို့ခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်ရွေးချယ်မိသော cookies များကိုသင်၏ဘရောက်ဇာတွင်နေရာချကာသင်ကြည့်ရှုခဲ့သောဝက်ဘ်ဆိုက်များ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသိမ်းဆည်းထားလိမ့်မည်။ သင်ကြည့်ရှုနေသည့်အရာပေါ် အခြေခံ၍ ကြော်ငြာခြင်းသည်တူညီသောကြော်ငြာကွန်ယက်များကိုအသုံးပြုသော ၀ ဘ်ဆိုဒ်များကိုသင်လည်ပတ်သောအခါသင်ပြလိမ့်မည်။ သင်ရွေးချယ်ပြီးပါကကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏တည်နေရာ၊ သင်နှိပ်လိုက်သောကမ်းလှမ်းမှုများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်အက်ပလီကေးရှင်းများနှင့်ဆင်တူသောအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုများအပေါ် မူတည်၍ ကြော်ငြာများနှင့်အတူ cookies များနှင့်အလားတူနည်းပညာများကိုသင်သုံးနိုင်သည်။
သင်၏ privacy settings များကိုချိန်ညှိရန်ဤစာမျက်နှာကိုသွားပါ။ သီးသန့်လုံခြုံရေး Preferences ကို
ကယ်လီဖိုးနီးယားလူထုအခြေပြုကျင့်ထုံးဥပဒေပုဒ်မ ၁၇၉၈.၈၃ အရ၊ ဤပေါ်လစီအရသင်သည် အကယ်၍ သင်အထူးရွေးချယ်ခြင်းသို့မဟုတ်ရွေးချယ်ခွင့်ပြုခြင်းခံရလျှင်တိုက်ရိုက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးရည်ရွယ်ချက်များအတွက်တတိယပုဂ္ဂိုလ်များအား (ကယ်လီဖိုးနီးယားမြို့ပြ Code Code ပုဒ်မ ၁၇၉၈.၈၃ တွင်သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း) ကျွန်ုပ်တို့သည်တိုက်ရိုက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုသာမျှဝေကြောင်းဖော်ပြထားသည် သင်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုပေးသောအချိန်၌သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့ပေးသော ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုနှင့်ဆက်သွယ်သည့်အချိန်တွင်ထိုကဲ့သို့ခွဲဝေမှုများမှထွက်ခွာခြင်းမပြုရန်ရွေးချယ်ပါ။ သင်ဝင်ရောက်ခြင်းမပြုပါကသို့မဟုတ်ထိုအချိန်တွင်သင်ရွေးချယ်ခြင်းမပြုပါကကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုမည်သည့်တတိယပါတီနှင့်မျှဝေမည်မဟုတ်ပါ။
ကယ်လီဖိုးနီးယားစီးပွားရေးနှင့်အသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းမှုဆိုင်ရာကုဒ်ပုဒ်မ ၂၂၅၇၅ (ခ) က“ ကယ်လီဖိုးနီးယားတွင်နေထိုင်သူများသည်ဘရောက်ဇာဆက်တင်များကို“ မခြေရာမပြုကြ” ရန်ကျွန်ုပ်တို့မည်သို့တုံ့ပြန်သည်ကိုသိခွင့်ရှိသည်။ လက်ရှိအခြေအနေတွင်စက်မှုလုပ်ငန်းတွင်ပါ ၀ င်သူများအနေဖြင့်ဤအခြေအနေတွင်“ NOT TRACK” ဆိုသည့်အဓိပ္ပာယ်နှင့် ပတ်သက်၍ မည်သည့်အုပ်ချုပ်မှုမျှမရှိပါ။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအချက်ပြမှုကိုခံယူသောအခါကျွန်ုပ်တို့၏အလေ့အကျင့်များကိုပြောင်းလဲမည်မဟုတ်ပါ။ သင်“ မခြေရာခံရန်” အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက ကျေးဇူးပြု၍ သွားရောက်ပါ https://allaboutdnt.com/ .
ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုမှတ်ပုံတင်တွင်သိမ်းဆည်းထားကြောင်းထင်ရှားလျှင်၎င်းသည်ချိုးဖောက်မှု၏ ၇၂ နာရီအတွင်းဤဝက်ဘ်ဆိုက်၏ဒေတာဘေ့စ်သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏တတိယပါတီအချက်အလက်သိုလှောင်သူများ၏ဒေတာဘေ့စ် (သို့မဟုတ်) ၏မည်သည့်ဥပဒေနှင့်မညီသောအချက်အလက်များကိုမဆိုသက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်အာဏာပိုင်များထံသတင်းပို့လိမ့်မည်။ ထုံးစံခိုးယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်
ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိပစ္စည်းများကို“ ဖြစ်သကဲ့သို့” ဖြည့်တင်းထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းသို့မဟုတ်အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်ခြင်းမရှိသောအာမခံချက်များကိုမပြုလုပ်ပါ၊ အကန့်အသတ်မရှိ၊ ကုန်သွယ်မှု၊ သတ်သတ်မှတ်မှတ်ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုအတွက်ကြံ့ခိုင်မှုရှိခြင်း၊ သို့မဟုတ်မူပိုင်ခွင့်ကိုချိုးဖောက်ခြင်းအပါအ ၀ င်အခြားအခြားအာမခံချက်များကိုလည်းငြင်းပယ်ခြင်းနှင့်ပယ်ဖျက်ခြင်း။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်တိကျမှန်ကန်မှု၊ ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိသောရလဒ်များသို့မဟုတ်ဤအင်တာနက်ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိပစ္စည်းများအသုံးပြုခြင်း၏ယုံကြည်စိတ်ချရမှုသို့မဟုတ်ဤကဲ့သို့သောပစ္စည်းများနှင့်သို့မဟုတ်ဤဆိုဒ်နှင့်ဆက်စပ်သောဆိုဒ်များနှင့်သက်ဆိုင်သောမည်သည့်ကိုယ်စားပြုမှုကိုမျှအာမခံခြင်းမပြုပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤပေါ်လစီအားအချိန်မရွေးကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်ပြုပြင်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပြောင်းလဲမှုများကိုကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များသို့မဟုတ် ၀ က်ဘ်ဆိုက်သုံးစွဲသူများအားကျွန်ုပ်တို့အတိအလင်းအသိပေးလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ထိုအစား၊ မူဝါဒအပြောင်းအလဲများအတွက်သင်ဤစာမျက်နှာကိုရံဖန်ရံခါစစ်ဆေးရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။
ဒီက web site ကိုရယူသုံးခြင်းအားဖြင့်, သင်သည်ဤ web site ကိုစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့်သုံးစွဲမှုအခြေအနေ, ရှိသမျှတည်ဆဲဥပဒေများနှင့်စည်းမျဉ်းများအားဖြင့်ချည်နှောင်လျက်ခံရဖို့သဘောတူ, သင်မဆိုသက်ဆိုင်ဒေသခံဥပဒေများနှင့်အတူလိုက်နာမှုများအတွက်တာဝန်ရှိဖြစ်ကြောင်းသဘောတူကြသည်။ သင်တို့သည်ဤဝေါဟာရများကိုမဆိုသဘောတူမထားဘူးဆိုရင်, သင်သည်ဤ site ကို အသုံးပြု. သို့မဟုတ်ကြည့်ရှုခြင်းမှပိတ်ပင်တားမြစ်သည်။ ဒီက web site ကိုတွင်ပါရှိသောအဆိုပါပစ္စည်းများသက်ဆိုင်သောမူပိုင်ခွင့်များနှင့်ကုန်သွယ်မှုအမှတ်အသားဥပဒေဖြင့်ကာကွယ်ထားပါသည်။
ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးမဟုတ်သောကူးပြောင်းရေးကာလအတွက်သာကြည့်ရှုရန်အတွက် BMG ၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိပစ္စည်းများ (သတင်းအချက်အလက်သို့မဟုတ်ဆော့ဖ်ဝဲ) တစ်ပုဒ်ကိုခေတ္တဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်ခွင့်ပြုထားသည်။ အကယ်၍ သင်သည်ဤကန့်သတ်ချက်တစ်ခုခုကိုချိုးဖောက်ပြီး BMG မှအချိန်မရွေးရပ်စဲလျှင်ဤလိုင်စင်သည်အလိုအလျောက်ရပ်ဆိုင်းသွားလိမ့်မည်။ ဤအချက်အလက်များကိုသင်၏ကြည့်ရှုခြင်းအားရပ်စဲလိုက်သည့်အခါသို့မဟုတ်ဤလိုင်စင်သက်တမ်းကုန်သွားသည်နှင့်အမျှသင်၏ပိုင်ဆိုင်မှုရှိဒေါင်းလုပ်လုပ်ထားသောမည်သည့်ပစ္စည်းကိုမဆိုအီလက်ထရွန်နစ်သို့မဟုတ်ပုံနှိပ်ထားသောပုံစံဖြင့်ဖျက်ဆီးပစ်ရမည်။
BMG ၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ရှိအကြောင်းအရာများကို“ ကဲ့သို့” ဖြည့်တင်းထားသည်။ BMG သည်မည်သည့်အာမခံချက်ကိုမျှထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းသို့မဟုတ်အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်ခြင်းမရှိစေရ။ ကန့်သတ်ချက်မရှိခြင်း၊ ကုန်သွယ်ခြင်း၊ သတ်သတ်မှတ်မှတ်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သင့်လျော်ခြင်း၊ ဉာဏပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုကိုချိုးဖောက်ခြင်းသို့မဟုတ်အခြားအခွင့်အရေးများအားချိုးဖောက်ခြင်းအပါအ ၀ င်အခြားအာမခံချက်များအားလုံးကိုငြင်းဆိုခြင်းနှင့်ပယ်ဖျက်ခြင်းများပြုလုပ်သည်။ ထို့အပြင် BMG သည်၎င်း၏အင်တာနက်ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်သို့မဟုတ်ဤကဲ့သို့သောပစ္စည်းများနှင့်သို့မဟုတ်ဤဆိုဒ်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောဆိုဒ်များနှင့်သက်ဆိုင်သောအချက်အလက်များ၏တိကျမှန်ကန်မှု၊ ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိသည့်ရလဒ်များသို့မဟုတ်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုများနှင့်စပ်လျဉ်း။ မည်သည့်ကိုယ်စားပြုမှုကိုမှအာမခံခြင်းမပြုပါ။
BMG ၏အင်တာနက်စာမျက်နှာရှိပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ်အသုံးမပြုနိုင်ခြင်းကြောင့်ပေါ်ပေါက်လာသော BMG နှင့်၎င်း၏ပေးသွင်းသူများသည် (ဒေတာ (သို့) အမြတ်အစွန်းပျောက်ဆုံးခြင်းသို့မဟုတ်စီးပွားရေးပြတ်တောက်ခြင်းများအပါအ ၀ င်) အကန့်အသတ်မဲ့မည်သည့်ထိခိုက်မှုအတွက်မဆိုမည်သည့်ကိစ္စရပ်အတွက်မျှတာ ၀ န်မရှိပါ။ BMG သို့မဟုတ် BMG အခွင့်အာဏာကိုယ်စားလှယ်ကိုထိုကဲ့သို့သောပျက်စီးမှုဖြစ်နိုင်ခြေကိုနှုတ်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ စာဖြင့်ဖြစ်စေအသိပေးခဲ့လျှင်ပင်။ အချို့သောတရားစီရင်မှုများသည်အဓိပ္ပါယ်သက်ရောက်သောအာမခံချက်များအပေါ်ကန့်သတ်ခြင်းများကိုဖြစ်စေ၊ နောက်ဆက်တွဲဖြစ်စေ၊ ဖြစ်စေ၊ ဖြစ်စေထိခိုက်နိုင်သောပျက်စီးမှုများအတွက်တာ ၀ န်ယူမှုကန့်သတ်ချက်များကိုခွင့်မပြုသောကြောင့်၊ ထိုကန့်သတ်ချက်များသည်သင်နှင့်သက်ဆိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
BMG သည် ၀ က်ဘ်ဆိုက်အတွက်အသုံးပြုမှုဆိုင်ရာစည်းကမ်းချက်များကိုအချိန်မရွေးအသိပေးခြင်းမပြုပဲပြန်လည်ပြင်ဆင်နိုင်သည်။ ဤဝဘ်ဆိုက်ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်သင်သည်ယခုအသုံးပြုမှုစည်းမျဉ်းများနှင့်အခြေအနေများ၏လက်ရှိမူကွဲအားဖြင့်ချည်နှောင်ခြင်းကိုခံရန်သဘောတူသည်။